लिंगमय पार्कमा घुम्न आउने युवती धेर्रै !
एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको एउटा पार्कमा अहिले देश विदेशका मानिस चासोका साथ हेरिरहेका छन् । लिंगको आकृतिमा ढालिएका स्मारकहरुले सो पार्क भरिएको छ । सन २००७ देखि सञ्चालनमा आएको उक्त
काठमाडौं । एकजना अमेरिकी मोडलले अध्ययन र भ्रमण खर्चको लागि आफ्नो कुमारीत्व २९ लाख अमेरिकी डलरमा बेचेको बताएकी छन् । १९ वर्षीया अमेरिकी मोडल गिसेलाले २९ लाख अमेरिकी डलरमा आफ्नो
एजेन्सी । अफ्रिकाको मलावीमा आमाबाबुहरु आफ्ना छोरीहरुलाई सेक्स क्याम्पमा पठाउँछन् । त्यहाँ छोरीको उमेर १० वर्ष पुगेपछि कुमारित्व भंग गर्न भन्दै सेक्स क्याम्प पठाउने चलन छ। १० वर्षकी ग्रेसलाई गोल्डेन
राजपरिवारका सदस्यलाई थुन्न पाँचतारे होटललाई नै बनाइयो जेल
साउदी। भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार गरिएका ११ साउदी राजकुमारलाई थुन्नका लागि एउटा पाँचतारे होटललाई नै जेल बनाइएको छ । साउदी अरबमा हालै त्यहाँका ११ राजकुमार, चार वहालवाला मन्त्री र दर्जनौं पूर्वमन्त्रीलाई
वासिङ्टन, (एजेन्सी) अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई क्युबासँगको व्यापारलाई लिएर नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस प्रतिबन्धले अमेरिकी नागरिकलाई क्युबाको सरकारी कम्पनी वा संस्थानसँगको व्यापारमाथि रोक लगाएको छ। यसमा सरकार सञ्चालित होटल र
पौराणिक ग्रन्थहरुमा स्त्री र पुरुषका शारीरिक बनावट, हाउभाउ तथा बानीबेहोराका आधारमा उनीहरुलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरेको पाइन्छ । तिनै ग्रन्थहरुका अनुसार पुरुषजस्तै नारीहरु पनि चार प्रकारका हुन्छन् पद्यमिनी, चित्रिणी, शंखिनी
एजेन्सी । अस्ट्रियाको राजधानी भियना नजिकै एउटा यस्तो स्कुल छ । जहाँ विद्यार्थीहरुलाई ब्यबहारिक रुपमै सेक्स गर्न सिकाइन्छ । बिगत केही बर्षदेखी चल्दै आइरहेको उक्त स्कुलको नाम ‘भियना सेक्स स्कुल’
नासा, (एजेन्सी) सौर्य मण्डलमा बृहस्पति ग्रहको कयौं चन्द्रमा छन्, शनि ग्रहवरपर चक्रहरूले घेरिएका छन् र पृथ्वीमा जीव छ, तर मंगल ग्रहसँग त्यस्तो विशेष के छ ? यो प्रश्नको जवाफ हालै
डा.माइकल मोस्ली, बीबीसी नियमित कार्य व्यस्तताबाट फुर्सत पाउने सप्ताहान्तमा हामीले सधैंभन्दा अलि बढी सुत्न पाउनु ठूलो कुरा हो। बेलायतजस्तो अति अनुशासित समय तालिकाअनुसार चल्ने हाम्रो राष्ट्रमा मानिसहरू निरन्तर रूपमा निद्राबाट
नयाँदिल्ली, (एजेन्सी) पूर्वी भारतीय राज्य ओडिसाको एक विकट आदिवासी गाउँमा एकजना मानिस बिहान उठेर हेर्दा आफ्नो आँगनमा तीन मिटर लामो गोही देखेर छक्क परेका छन्। दसरथ मदकामी नामक ती
यस्तो कुखुरा जुन घाँटी काटेपछि पनि डेढ वर्ष बाँच्यो
विश्वमा केही घटनाहरु यस्ता हुन्छन्, जुन पत्याउन निकै गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै एक घटना अमेरिकाको मिसिगनमा रहेको भेन भन्ने स्थानमा घटेको छ । अमेरिकाको यो क्षेत्रमा मानिसहरु कुखुराको मासु खान
एजेन्सी । मृत्युपछि के हुन्छ भन्ने आजसम्म कसैले पत्ता लगाउन सकेको छैन । तर यससम्बन्धी वर्षौँ लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको न्यूयोर्क युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिसिनले नयाँ खुलासा गरेको छ । उनीहरुको
एक महिला जस्ले आफ्नो कामुकता देखाएर करोडौको टेण्डर हात पर्छिन । उनले आफै के खुलासा गरेकी छिन् भने टेण्डर हात पार्न मन्त्रि देखी सेक्युरिटीसँग पनि सेक्स गरेकी छिन त्यो पनि
न्युयोर्क (एजेन्सी) यूएफओ प्रशंसकहरूले विश्वास गरेको जस्तै बाह्य ग्रहका जीव कमजोर, तालु र ठूल्ठूला आँखा भएका हुन सक्छन् वा पातलो अग्लो, गुलाफी आँखा भएका हरियो फुलेको जीउडाल भएका ?
काठमाडौं , पछिल्लो समय नेपालमा पनि विश्वस्तरका अत्याधुनिक टेलिभिजन सेटहरु बजारमा आईपुगेका छन । काठमाण्डौ उपत्यकामा मात्रै होईन पोखरा भरतपुर वुटवल बिरगंजदेखी देशका अन्य साना ठुला शहरमा यस्ता टेलिभिजनमा आर्कषक
खसी प्रतियोगिता !
विभिन्न मुलुकमा खसीको सौन्दर्य प्रतियोगिता सञ्चालन हुन्छ । ऊँटको सौन्दर्य प्रतियोगिताबाट प्रभावित भएर साउदी अरेबियामा खसीको सौन्दर्य प्रतियोगिता समेत आयोजित गरिन्छ । यस्तै किसिमको अर्को प्रतियोगिता लिथुवानियाको रेमिगालामा आयोजना हुन्छ
‘लिङ्ग’को बारेमा कुरा गर्दा धेरैजना अप्ठ्यारो मान्ने गर्छन्, अझ कतिले यस्ता व्यक्तिहरूलाई समाज र संस्कृतिको कलङ्कको रूपमा हेर्दछन्। तर एकचोटि गहिरिएर सोच्नुहोस् त, पुरुषको लिङ्ग र महिलाको योनी बिना के
बिस्तारै बाँदरमा परिणत हुँदैछिन् यी बच्ची
एजेन्सी । अनुहार नै मानिसको पहिचान हो तर त्यही अनुहार बिग्रियो भने के हालत होला रु एकजना यस्ती बच्ची छिन् जसको अनुहार बिस्तारै बाँदरको जस्तो हुँदै गइरहेको छ । यी
कण्डम लामो बनाउन सरकारी उर्दी !
आफ्नो देशका पुरुषहरुका लागि बजारमा उपलब्ध कण्डम छोटो भएपछि सरकारले ठूलो आकारका कण्डम उत्पादन गर्न उत्पादकहरुलाई जरुरी उर्दी जारी गर्नुपरेको छ । दर्जनौँ युवाहरुले बजारमा उपलब्ध कण्डमहरु आफ्नो लिंगका लागि